कार्तिक ९ गते मंगलबार,कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल - Sawal Nepal
विराटनगर सवाल नेपाल २०७८ कार्तिक ८, २१:०३
घरमा मित्र तथा आफन्तको आगमनले खुशीयाली माहोल रहनेछ। साथै उनीहरुसँग भएको आकस्मिक भेटले खुशी रहनुहुनेछ। आर्थिक लाभ मिल्नुको साथसाथै बसाईको तयारी गर्नुहुनेछ। नयाँ कार्य सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। उत्तम भोजन गर्नाले लाभ हुनेछ।
कुनै प्रकारको अविचारी कदम वा निर्णय लिनुभन्दा अगि सोच्नु पर्नेछ। कसैसँग गलत धारणा हुन्हो सक्ला। स्वास्थ्य खराब हुनाले तपाईको मन उदास रहनेछ। परिवारको सदस्यसँग विरोध मतभेद खडा हुनेछ। अधिक खर्च हुन सक्ला।
सामाजिक, आर्थिक तथा पारिवारिक क्षेत्रमा लाभ हुन सक्ला। समाजमा मान- प्रतिष्ठा वृद्धि हुनेछ। मित्रतर्फबाट लाभ हुनेछ र पैसा पनि खर्च हुनेछ। जीवनसाथीको खोजीमा रहनुहुनेछ। श्रीमती तथा छोरासँग अधिक कुराकानी गर्नुहुनेछ।
व्यवसायमा क्षेत्रमा उच्च पदाधिकारीको प्रोत्साहनले उत्साह बढ्नेछ। आमा तथा परिवारको अन्य सदस्यसँग अधिक निकटता रहनेछ। मान प्रतिष्ठा वृद्धि हुनाले खुशी रहनुहुनेछ। तपाईको स्वास्थ्य स्वस्थ रहनेछ। सरकारी कार्यमा अनुकूलता रहनेछ।
थकानले काम गर्ने गति कम हुनेछ। स्वास्थ्यमा समस्या होला। पेसा व्यवसायमा ढिलाई हुनाले प्रगतिमा बाधा उत्पन्न हुनेछ। उच्च पदाधिकारीसँग टाढा घुम्न जानुहुनेछ। रिसलाई नियन्त्रण गर्नुहोला। धार्मिक कार्य वा यात्रासँग सम्बन्धित भक्तिभाव प्रकट हुनेछ।
मन र ध्यानलाई मन्त्र बनाउनुहोला। किनकी स्वभावको उग्रताले कसैसँग मनमुटाव गराउनेछ। त्यसैले सचेत रहनुहोला। नयाँ कार्यको सुरुवात नगर्नुहोला। जलाशयबाट टाढा रहनुहोला। अत्यधिक खर्च हुनेछ।
दैनिक कार्यको बोझ हल्का हुनको लागी पार्टी, सिनेमा, नाटक वा पर्यटन आयोजन गर्नुहुनेछ। विपरीत लिंगीय व्यक्ति वा प्रियतमसँग आनन्द मिल्नेछ। नयाँ कपडा खरिद गर्नुहुनेछ। सार्वजनिक मान- सम्मानको अधिकारी बन्नुहुनेछ।
पारिवारिक शान्तिको माहोलले तपाईको तन-मनलाई स्वस्थ राख्नेछ। निर्धारित काममा सफलता मिल्नेछ। पेसामा साथी कर्मचारीको सहयोग मिल्नेछ। प्रतिष्पर्धी र शत्रुको चाल निष्फल हुनेछ। माइती पक्षबाट लाभ हुनेछ। आर्थिक लाभ हुनेछ। बिरामी व्यक्तिबाट स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ।
सन्तानको स्वास्थ्य र पढाईको बारेमा चिन्ताको कारण मन निराश रहनेछ। कार्य असफलताले निराशा उत्पन्न गर्नेछ। रिसलाई नियन्त्रण गर्नुहोला। साहित्य, लेखन तथा कलाप्रति गहिरो रुचि राख्नुहुनेछ। प्रियजनसँग भेट हुनेछ। वाद-विवाद तथा चर्चामा नउत्रिनुहोला।
ताजगी एवम् उर्जाको अभावको कारण अस्वस्थता अनुभव गर्नुहुनेछ। मनमा चिन्ताको भावना रहनेछ। परिवारको सदस्यसँग झगडा हुनेछ। समयमा भोजन र शान्त निन्द्राबाट वन्चित रहनुहुनेछ। स्त्री वर्गबाट केहि नोक्सान हुनेछ।
मन चिन्तामुक्त रहनाले राहत महसूस गर्नुहुनेछ र उत्साह वृद्धि हुनेछ। वृद्द र मित्रको तर्फबाट लाभ मिल्नेछ। आफन्तसँग आनन्दपूर्वक समय बिताउनुहुनेछ। प्रिय व्यक्तिसँग र दाम्पत्यजीवनमा अधिक धनिष्ठता अनुभव गर्नुहुनेछ। आर्थिक लाभ र सामाजिक मान प्रतिष्ठाको अधिकारी बन्नुहुनेछ।
आर्थिक आयोजन गर्नको लागि शुभ दिन रहेको छ। निर्धारित कार्य पूरा हुनेछ। साथै आय बढ्नेछ। परिवारमा सुख-शान्तिको वातावरण बनिरहनेछ। सुरुचिपूर्ण भोजन प्राप्त हुनेछ।
मङ्सिर १९ गते आईतबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल
मंसिर १९ गतेदेखि २५ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहोस्
मङ्सिर १८ गते शनिबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस भोलिको राशिफल